Kheyraadka safarka: ballanso hudheelada, raadso duulimaadyada, gawaarida kirada ah, ...
Kuwani qorsheynta safar oo ma u baahan tahay caawimaad? Kadib websaydhkani waa sida saxda ah ee aad raadineyso. Daaran absolutviajes.com waxaan haynaa dhammaan macluumaadka ugu fiican ee ku saabsan meelaha ugu muhiimsan ee dalxiisyada adduunka loo tago. Maalin kasta waxaan ku daabacnaa maqaallo tilmaamaha safarka, meelaha aad seegi kartid, xeebaha ugu fiican, dabeecadda ugu cajiibka badan, gastronomy-ka ugu fiican iyo waxyaabo kaloo badan.
Miyaan kaa caawin karnaa safarkaaga?
Sidoo kale haddii aad diyaarinayso safar ammaan ah taasi waxaad u baahan tahay caawimaad si aad u ballansato hudheelada, raadinta duulimaadyo, kireynta gaari kiro ah,… iyo tan oo dhan qiimaha ugu macquulsan iyo dhamaan dammaanadaha suuqa. Maxaa dhacaya haddii Hagaag, halkan ayaan kaa caawin karnaa sidoo kale. Isticmaal makiinadaha raadinta soo socda si aad u hesho qiimaha ugu jaban oo kaliya ka walwalo inaad ku raaxeysato fasaxyadaada.
Raadinta mashiin raqiis ah
Halkan waxaad ka heli doontaa dalab hudheel ee ugu fiican. Raadi oo ballanso hudheelkaaga xaaladaha ugu fiican, daqiiqado yar iyo dhammaan dammaanadaha.
Mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ayaa ah inaan helno hudheel aan degi karno oo aan ku nasan karno maalmaha nasashada. Tan awgeed, waxba kama doortaan sida ugu fiican hoteello jaban laga heli karo adduunka oo dhan. In kasta oo aad u malaynayso inay noqon karto hawl cakiran, haddana sidaas kuma adkaanayo mashiinka raadinta hudheelka. Sidan oo kale, waa inaan ka fikirnaa oo kaliya meesha aan dooneyno inaan ku lumno dhowr maalmood.
Markii aan si cad u helno, waxaan ku qornay baarka baaritaanka. Isaga dabadiis, waxa kaliya ee haray waa in la go'aansado maalinta iyo bisha aan nasashada ku qaadan doonno. Si tan loo sameeyo, waxaad arki kartaa sida kalandarka loo soo bandhigo. Sidan oo kale, xitaa way fududaan doontaa in la doorto maalmaha. Ugu dambeyntiina, waxaad heli doontaa oo keliya ikhtiyaarka aad ku dooran karto tirada dadka.
Marka la buuxiyo, way soo muuqan doonaan dalabyada ugu fiican iyo dallacsiinta hudheelada aagga la doortay. Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarro soo jiidasho leh sida hudheelada loo wada dhan yahay ama kuwa quraacda kuu fidiya. Hadda waa inaad iska hubisaa haddii ay tahay waxa aad jeceshahay oo aad kala doorato xulashooyinkaan kala duwan. Xaqiiqdii dhammaantood waxay noqon doonaan sidaad jeceshahay!
Raadinta duulimaadyada raqiiska ah
Ku safro halka aad u safreyso waxaan kuu haynaa duulimaad qiimaha ugu fiican. Adeegso mashiinka raadinta oo ku hel duulimaadkaaga dammaanad buuxda oo aad u jaban.
Ku raadi duulimaadyada Rumbo
Raadi duullimaadyada leh eDreams
Raadi duullimaadyada Skyscanner
Ku raadi duulimaadyada Atrapalo
Ku raadi duulimaadyada Liligo
Ka raadi duulimaadyada Lastminute
Haddii aan horey u dooranay aagga aan booqaneyno, iyo xitaa hoteelka aan degi karno, waa inaan hubinno helitaanka duulimaadyada. Uma baahnid dhibaato ka badan tan aan hadda kuu sharaxnay. Isla bogga, waxaad ka ogaan kartaa mashiinka raadinta duullimaadyo raqiis ah. Qalab leh wax kasta oo lagu doorto faa'iidooyinka waaweyn oo aad iyaga ka heli karto.
Waxaa jira dad badan oo u maleynaya in duulimaadka aan luminno qeyb badan oo ka mid ah miisaaniyadda. Maaddaama aynaan dhammaanteen haysan miisaaniyado waaweyn oo fasax ah, waa inaan xoogaa isku soo ururinno. Dabcan, waad ku mahadsan tahay mashiinka raadinta wanaagsan, waxaad kuu dooran kartaa heshiisyada duulimaadka adiga. Qiimaha ugu fiican iyo shirkadaha iyaga bixiya ayaa soo muuqan doona. Si la mid ah, asalka sidoo kale waa la tilmaami doonaa, iyo sidoo kale meesha loo socdo iyo saacadaha muddada isku mid ah. Sidaa darteed, haddii ay leedahay miisaan, sidoo kale si cad ayaa loo tilmaami doonaa. Markaad buuxisid meelaha lagaa codsaday ee mashiinka raadinta, waxaad kuheli doontaa meesha aad kujirto oo dhan dammaanadaha iyo natiijada qiimaha ugu xiisaha badan
Hel gaariga kirada ah ee sida ugu fiican ugu habboon baahiyahaaga magaalada aad u socoto Waxaan haynaa dalabkii ugu ballaarnaa ee gawaarida kirada ah adduunka oo dhan iyo qiimaha ugu fiican.
Haddii aadan rabin inaad gaarigaaga qaadato, laakiin markaa aad rabto inaad u guurto meesha aad u socoto adoo raaxo leh, waxaad sidoo kale dooran kartaa gawaarida kirada ah Si looga fogaado inaad shaqsi ahaan wax u weyddiisato oo aad xaq u yeelatid markii aad degto, ha ilaawin makiinadda baarista gaariga kirada ah.
Dhexdeeda waxaad si fudud uga geli kartaa dhammaan shirkadaha waaweyn. Intaas waxaa sii dheer, markaad khadka internetka ka ballansaneyso, waxaad ka faa'iideysan kartaa qiimo dhimis weyn. Wax aan waligood xanuunayn. Dabcan, faa iidada kale ee jaaleysiga gaari kiro ah waa inaad maamuli kartaa boos celintaada. Tani waa inaad wax ka beddeli karto ama xitaa joojin karto.
Talooyin markaad kireysato gaari
Marka lagu daro inaad tahay tallaabo aad u fudud, iyada oo loo marayo mashiinka raadinta, waa inaad ogaataa taas baabuur kasta qiimihiisu waa leeyahay. Tan waxaa si buuxda loogu sharxi doonaa bog kasta oo aad marin u heli karto. Had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa nooca gaariga iyo mararka qaarkood xitaa meesha aan ka kireyno. Taasi waa sababta Renault Clío ama Citroen C1 ama C4 ay yihiin xulashooyinka ugu jaban. Dabcan, sidaan kuu sheegeyno, marwalba waa inaad ka hubisaa degel kasta oo si fiican u aqriso shuruudaha.
Sii ballanso markasta oo aad kari karto ka hor. Waxaan sifiican u ognahay in taariikhaha xilli sare ay had iyo jeer qaali ka dhigaan qiimaha. Shirkadaha qaar waxay u baahan yihiin in darawalku uusan ka yarayn 25 sano, laakiin qaar ka mid ah qarashyada ayaa lagu dari karaa. Xusuusnow inaad had iyo jeer tahay inaad uga tagto haanta gaaska sidaan u helnay. Taasi waa sababta, halka ay suurtagal tahay, aan dooran doonno siyaasad ku saleysan taangi buuxa / buuxa. Qaabkan ayaan uga fogaan doonnaa waxyaabaha layaabka leh waxaanan awood u yeelan doonnaa inaan ku shubno baatrool meesha ay nagula habboon tahay, illaa iyo inta aan si buuxda uga tagno.
Qaado caymiska safarka
Haddii aad safar u aadayso dibadda oo aad rabto inaad ka fogaato nooc kasta oo dhibaato ah, fikradda weyn ayaa ah inaad gasho caymiska safarka. Bixiyahayaga IATI Caymiska waxay bixisaa caymiska safarka ee ugu balaaran baahidaada. Intaas waxaa sii dheer, qandaraaska caymiskaaga adigoo maraya boggayaga internetka waxaad ku raaxeysan doontaa 5% qiimo dhimis ah marka loo eego heerarka caadiga ah.
Nidaamka qandaraaska caymiska waa mid aad u fudud, waa inaad:
Gal bogga caymiska adigoo gujinaya halkan.
Sheeg meesha aad degan tahay, meesha aad u socotid iyo taariikhda
Dhagsii badhanka «Xisaabi miisaaniyadda» waadna dhamaysay
Waqtigan xaadirka ah qalabku wuxuu ku siinayaa dhammaan buug-yaraha alaabada ee ay ku heli karto safaradaada qiimaha ugu fiican. Xullo midka kuugu habboon baahiyahaaga oo buuxi faahfaahintaada si aad u kireysato adigana HORTA AAD HAYSATO CAYMISKAAGA.
Halkan guji inaad ballansato caymiska safarkaaga oo lagaa dhimayo 5%
Meelaha martigaliya dalxiisayaal badan sanad walba
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago waa Faransiiska. Waxay ku jirtaa meesha ugu horeysa, sida lagu sheegay daraasad la daabacay. Waxaa la sheegay in kudhowaad 85 milyan oo qof ay doorteen meeshan dabcan, waa in la yiraahdaa layaab malahan. Waxaa jira soojiidasho badan oo Faransiisku leeyahay. Dalxiisayaashu waxay doortaan Taawarka Eiffel inuu yahay mid ka mid ah meelaha laga arki karo. Qaarkood waxay ku dhiiradaan inay fuulaan, halka kuwa kale ay ka fekeraan banaanka iyo gaar ahaan qorrax dhaca.
In kasta oo khadadka dhaadheer, Louvre sidoo kale waa waajib. Waxyaabaha aan sidoo kale ka nidhaahno Notre Dame Cathedral. Sidoo kale waa inaadan iloobin inaad booqato mid ka mid ah meelaha ugu jacaylka badan, in kasta oo aaggan mid kasta iyo qof walbaaba uu leeyahay burushkan. Mont Saint Michel, oo ah xero leh kaniisad ay tahay in la arko si looga fikiro quruxdeeda dhabta ah. The Arc de Triomphe, Basilica ee Qalbiga Xurmaysan iyo sidaa darteed waxaan ku qori karaa bogag ay tahay inaad aragto, ugu yaraan, hal mar noloshaada.
Meel kale oo ka mid ah meelaha ugu dalxiis tagga badan, iyo tan lagu meeleeyo Faransiiska ka dib, waa Mareykanka. Dhexdooda, waxaa kale oo jira meelo ka badan kuwa kale. Dabcan, dalxiisku waa mid aad u cad.
Times Square: Fagaaraha caanka ah ee ku yaal magaalada New York wuxuu arkaa in ka badan 40 milyan oo dalxiisayaal ah oo ag mara sannad kasta. Kaliya muuqaalkeeda weyn ee nalalka ka buuxa, waxay ka dhigeysaa joogsi qasab ah.
Xadiiqadda Dhexe: Badhtamaha Manhattan, waxaan ka helnay jardiinadan weyn, oo xitaa aan ku aragnay filimo badan. Qiyaastii 35 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa sanad walba yimaada si ay u arkaan quruxdeeda iyo weynaanteeda.
Las Vegas: Yaan ku riyoon inuu ku guursado Las Vegas?. Shaki la'aan, mid kale oo ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan. Ujeedadaas kaliya maahan, laakiin casinos, ciyaaro sixir ama awood u leh inaad booqato Grand Canyon.
Boston: Waa magaalo leh hiddo dhaqameed weyn. Intaa waxaa dheer, ma iloobi karno makhaayada Cheers iyo dalabkeeda weyn ee 'gastronomic'.
San Francisco: Mid kale oo ka mid ah magaalooyinka ugu booqashada badan Mareykanka. Waxay marin weyn u leedahay wax kasta oo ay na siiso, maadaama aynaan u safri doonin meel aad u fog si aan u aragno wax kasta oo aan u baahan nahay.
Los Angeles: Waxaan illoobi karin Los Angeles. Buuraha, meelaha dalxiiska loo dalxiis tago iyo raaxada ay ka dheehanayso waa waajib.
Spain ayaa ku jirta kaalinta seddexaad ee kuwa booqda dalxiisayaasha. Intaas gudaheeda, waxaan leenahay meelo loogu talagalay dhammaan dhadhanka. Malaha, dalxiisayaashu waxay doortaan Masaajidka Córdoba, Alhambra ee Granada iyo La Sagrada Familia ee magaalada Barcelona, ​​oo ah meelaha saadaalinta saadaasha oo dhan ka kooban. Seville iyo Reales Alcázares kama fogayn booqasho culus. Dhinaca woqooyi, Cathedral-ka Santiago de Compostela waa barta ay ku kulmaan xujaajta iyo kuwa jecel farshaxanka. Biyo-mareenka Segovia ama Cathedral of Burgos waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin goobo dalxiis oo badan.